Vaovao farany nampidirina
DGI mandray anjara
Fanambarana, fandoavam-bola ary fametrahana ny tatitra ara-bola IR 2021
Ny adidy amin'ny fanambarana sy fandoavana ny hetra amin'ny fidiram-bola (IR) 2021 ary koa ny fametrahana ny tatitra ara-bola mifandraika amin'izany. Tohiny
Fanemorana ny fe-potoana hanambarana ny zon'ny fifandraisana amin'ny 30 jona 2022.
Ireo fanambarana ireo dia tsy maintsy apetraka sy hamarinina amin'ny alàlan'ny sehatra hanaovana fanambarana an-tserasera momba ny zon'ny fifandraisana, mifanaraka amin'ny fepetra andininy faha-20.06.12 al.3 sy 20.06.15 al.4 amin’ny Fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra. Tohiny
Taratasy ho an'ny toerana haleha,
Mba hanajana ny toetra voalohan'ny AD, ny mpamatsy na mpanome tolotra iharan'ny haba amin'ny tataom-bidy izay manatitra entana na manolotra serivisy any amin'ny masoivoho sy ireo mpikambana mahafeno fepetra dia tsy maintsy manao faktiora / tombana proforma. Hijery ny tohiny
07 aprily 2022
Fizaram-baovao mahakasika ny fametrahana ny atotantaratasy momba ny fampitambidy.
Ny daty voatondro amin'ny fametrahana antontan-taratasy momba ny vidin'ny famindrana ho an'ny taom-bola 2020 sy 2021 dia nahemotra amin'ny daty manaraka izay hofaritana rehefa tapitra ny telovolana natokana ho an'ny fotoam-piofanana. jereo bebe kokoa
18 martsa 2022
Rakitsary momba ny Hetra Antsirabe
Fihaonana tamin'ireo koperativa sy ny fikambanan'ny mpanao asatanana, ny Ministera ny hay tao sy ny asatanana.
Niroso tamin'ny dingana voalohany amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana fiaraha-miasa izay nosoniavina ny 17 janoary lasa teo, ny Ministeran'ny Hay-tao sy ny Asa tanana (MAM), ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra (DGI), ny Tahirim-pirenena malagasy misahana ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS) ary ny banky BNI, ny marainan'ny Talata 15 martsa 2022, teny amin’ny Tranoben'ny MAM eny Andavamamba. Fihaonana tamin'ireo solotenan'ny Koperativa sy Fikambanana mpanao asa tanana no nanombohana izany, ka nitondra ny fanazavana mahakasika ny tolotra rehetra izay hositrahan'ireo mpanao asatanana ireo tomponandraikitra tsirairay. Fanentanana amin'ny fidirana ao amin'ny valan'ny ara-dalàna ary fampahafantarana ireo fanampiana ara-tsosialy ireo mpanao asa tanana amin’ny fampivoarany ny asany no anton'izao fifampiresahana izao. Araka izany dia : - Fanamorana ny fahazoana ny Karatry ny mpandoa hetra; - Fiahiana ara-tsosialy toa ny fisotroan-dronono, volan-jaza, fanampiana noho ny fahavoazana amin'ny asa ; - Fampindramam-bola amin'ny tahany 9% no homena ireo mpanao asatanana izay hiroso amin'ny fanatonana ny ara-dalàna. Nandray ireo fitarainana sy hetahetan'ireo Koperativa sy Fikambanana mpanao asatanana ireo ihany koa ireto tomponandraikitra, ary nanome toky fa hikaroka ny vahaolana sy hanamora ny fifampiresahana amin'ireo departemanta tsirairay voakasika. Misokatra ihany koa ny varavaran'ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hay tao, eo anivon’ny MAM, ho an'ireo rehetra izay manana fangatahana manokana mahakasika ity tetikasa iarahan'ny Ministera, ny DGI, ny CNaPS ary...
17 martsa 2022
Araka ny voalazan’ny andininy faha-01.01.14 II A al.2, 01.01.52 al.3 sy 5, 01.03.04.14, 06.01.09 bis, 20.06.12 al.2 an'ny CGI ary naoty n 002-MEF/SG/DGI/DLFC tamin'ny 10 Desambra 2021. Hijery
Lalàna n-2021-27 tamin'ny 19 Des.2021 momba ny LFI ho an'ny 2022
Slide mampiseho ny fepetra ara-pitantanana sy ny fepetra ara-dalàna nampidirin'ny Lalàna ara-bola ho an'ny taona 2022. Ny ambangovangony
Fanapahan-kevitra laharana 02/2022-MEF/SG/DGI tamin’ny 28 Febroary 2022 izay nanitsy ny fepetra voalazan’ny fanapahan-kevitra laharana 03-MFB/SG/DGI/DELF tamin’ny 4 Aprily 2012 mikasika ny fampiharana ny fepetra voalazan’ny andininy faha-06.01 faha-26.3. fehintsoratra. Miantraika amin’ireo olona iharan’ny VAT manokana ireo fepetra ireo, manitsy ny fetran’ny Ar 200.000, araka ny fanapahan-kevitry ny 4 aprily 2012 voalaza etsy ambony, izay Ar 500.000. Raha tsiahivina, ny fandoavana ny fifampiraharahana ataon’ny mpandoa hetra iharan’ny VAT amin’ireo mpamatsy tsy andoavam-bola dia tsy azo atao amin’ny vola mihoatra ny tokonam-baravarana voafaritry ny soratra manankery. Tohiny
05 martsa 2022
Fanitarana ny fe-potoana mahakasika ny fitsirihana ara-ketra, ny fitarainana amin'ny fifanolanana sy ny fitondrana ny raharaha eny amin'ny COFI
Ireo fepetra ireo dia mikasika manokana ny fanarahana ireo antontan-taratasy CSP sy ny fitsirihina ifotony VSP. Tohiny
Fe-potoana fanampiny ho an'ny fanamarinana hetra
Fe-potoana fanampiny telopolo andro no omena handefasana fanekena na fanamarihana aorian'ny fampahafantarana voalohany. ny tohiny
Fikarakarana ny hetra amin'ny hetra amin'ny varotra
Texts, ny fitsipika mifehy ny tsenam-bahoaka, sehatra fampiharana, famoronana hetsika sy andraikitra ...Hijery
13 desambra 2021
Famintinana ny hetra ho an'ny daholobe (IMP)
Ny sehatra, ny fototra, ny tahan'ny, ny kajy, ny fanangonana ary ny fepetra hafa. Hijery
ANJARA Hetrako Faritra SOFIA
Nahaliana ny maro ka naharitra hatramin'ny 7 ora sy sasany hariva ny hetsika ANJARA Hetrako faritra DIANA sy Sofia, nandritra ireo andro roa voalohany. Mifarana anio alarobia 1 Desambra ny anjaran'ny tampon-tanànan'i Antsiranana sy Antsohihy. Ho an'ny roa andro manaraka, ny 2 sy 3 Desambra, dia hitodi-doha ho any Ambilobe ny ekipa DIANA ary Boriziny kosa ny an'i Sofia.
01 desambra 2021
Fihaonan'ny Sampandraharahan'ny Hetra tamin'ny Sehatra tsy Miankina.
Nihaona ny alatsinainy 24 janoary 2021 tetsy amin'ny Tranoben'ny Varotra sy ny Indostria ny avy amin'ny Sampandraharahan'ny Hetra (#DGI ) sy ireo avy amin'ny Sehatra tsy Miankina nandihina ny mety ho fiaraha-miasa sy fifanampiana eo amin'ny sehatry ny fandoavan-ketra. Voasolo tena tao avokoa ireo Vondron'ny mpandraharaha toa ny GEM, ny SIM, ny Fivmpama, ny GEFP, ny sehatry ny fizahan-tany, sns, ary tena nafana ny adihevitra indrindra ny mahakasika ny redressement fiscal. Nanazava arak'izany ny Tale Jeneralin'ny Sampandraharahan'ny Hetra, Andriamatoa Germain fa raha ara-dalàna ny fanambarana rehetra natao, ary ananana porofo dia tsy tokony hitaintaina ny tompon'orinasa. Ary mbola nanampy izy fa tsy ilay sora-bola anatin'ny redressement no aloa fa fangatahana fanazavana fotsiny ihany iny. Notsindriany ihany koa fa 10.000 amin'ireo mpandraharaha 750.000 no anaovana io fampatsiahivana io. Niala tsiny arak'izany Andriamatoa Tale Jeneraly raha nandray ilay redressement ho toa ny fanenjehana ireo amin'ny Sehatra tsy Miankina. Ankoatra izay mbola manana zo hitondra fanazavana ireo ao amin'ny Sehatra tsy Miankina, manan-jo anao adihevitra ara-ketra, manome valiteny amin'ny fanadihadiana atao, manan-jo anao réclamation, ary farany hampakatra ny raharaha eny amin'ny Filankevim-panjakana na Conseil d'Etat. Maro ireo soso-kevitra sy tolo-kevitra natolotr'ireo mpandraharaha ary horaisina sy hodinihina avokoa hahatongavana amina marimatitra iraisana entina hanampiana ny Sehatra tsy Miankina amin'izao...
Fanakatonana ofisialy ny fiofanana fahatelo momba ny fitaovana TADAT
Antananarivo, 14 Desambra 2021. Lanonam-pamaranana amin’ny fomba ofisialy ny fiofanana fahatelo momba ny fitaovana TADAT sy ny fanolorana mari-pankasitrahana ho an’ireo mpandray anjara miisa 51 avy amin’ireo fampisondrotana roa farany nahavita soa aman-tsara ny fiofanana, izany hoe 20 mpiadina nohamarinina tamin’ny taona 2019 sy 31 (anisan’izany ny 03 avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola). tamin’ny taona 2020, natao ny 14 desambra teo tetsy Anosy. Raha ny marina, ao anatin’ny fanavaozana notarihin’ny Tale General Tax Direction (DGI) hanatsarana ny fidiram-bolan’ny hetra, dia natomboka ny volana septambra 2019 ny fiofanana ho an’ny ekipa mpitantana ny fitantanan-ketra momba ny Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) ), dia tamin'ny Janoary sy Febroary 2021 (onja faha-2). Notanterahina ny 6 desambra ka hatramin’ny 13 desambra 2021 araka izany ny fiofanana fahatelo manodidina ny fitaovana TADAT, teo ambany fiahian’ny sekretera jeneralin’ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andry Velomiadana Bearrison RAMAMANAMPANOHARANA. Nahatratra sehatra midadasika kokoa ity fotoam-piofanana farany ity, toy ny mpitantana sy ny lehiben’ny sampana miasa ao amin’ny DGI, ny solontenan’ny sampan-draharaha hafa ao amin’ny MEF (Direction Général de la Douanes, Direction de Audit Intern), Court of Auditors, EDBM, CSI, solontenan’ny ny sehatra tsy miankina sy ny solontenan’ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena (CSO), miisa 50 ny mpandray anjara. Araka izany, ao anatin’ny vinan’ny “administration innovative,...
15 desambra 2021
SEMINERA: Forum maneran-tany momba ny mangarahara sy ny fifanakalozam-baovao ho an'ny tanjona hetra Fanakalozana vaovao mahomby amin'ny fomba fijerin'ny mpanamarina ny hetra 26 hatramin'ny 28 Oktobra 2021 IBIS Hotel Mandray ny seminera Global Forum momba ny mangarahara sy ny fifanakalozam-baovao ho an’ny hetra i Madagasikara ny 26 ka hatramin’ny 28 oktobra 2021 ao amin’ny Hotel IBIS Ankorondrano. Ity fiofanana ity dia miompana amin’ny fifandraisana misy eo amin’ny fanadihadiana momba ny hetra nasionaly, ny rafitra fanangonam-baovao sy ny fifanakalozana vaovao (RE). Ny mpandray anjara dia ampahafantarina ny foto-kevitra fototra momba ny mangarahara sy ny RE mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, indrindra ny Exchange of Information on Request (DRE). Amin'ny alalan'ny andiana famelabelarana sy quizzes, ireo mpandray anjara dia ho zatra amin'ny fampiasana ny tambajotra sy ny rafitra fifanakalozam-baovao mba hanatsarana ny kalitaon'ny fanaraha-maso hetra sy hiadiana amin'ny fandosirana hetra. Entanina ireo mpandray anjara mba hampiasa tsara ireo fitaovana EOI ireo amin'ny fampitomboana ny isa sy ny kalitaon'ny fangatahana mivoaka amin'ireo mpiara-miombon'antoka mahazatra. Ny seminera dia hanamafy ny fahatsiarovan'ireo mpandray anjara fa ny fiarovana ny fidiram-bolam-pirenena dia mifandray akaiky amin'ny fampiasana mahomby ity tambajotra EOI ity. Mifototra amin’ny fitaovana fanofanana nomanin’ny Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, ity atrikasa ity dia namboarina hampiasain’ny Tale Jeneralin’ny Hetra eto...
08 novambra 2021
Tahaka ny isan-taona dia nandray anjara tamin'ny Foire Internationale de Madagascar (FIM) taona 2021, ny zoma 16 ka hatramin'ny alahady 19 septambra, ny Foibem-pitondrana ankapobeny ny Hetra. Izany no natao dia ho fanohizana ny ezaka fanatonana ifotony ny mpandoa hetra, koa ankoatra ny fandraisana sy fanazavana ireo fanontaniana samihafa nanitikitika ny mpandoa hetra dia nahafahana nahazo karatry ny mpandoa hetra teo noho eo ihany koa teny an-toerana, ka nahitana solon-tenan'ireo ekipan'ny hetsika ANJARA Hetrako
20 septambra 2021
Vita sonia ny 2 jolay ny fifanarahana teo amin'ny minisiteran'ny tontolo iainana, ny minisiteran'ny toekarena sy ny vola ary ny komity butana malgache. Ity fiaraha-miombon'antoka amin'ny daholobe ity dia manambatra ny fampiroboroboana angovo madio, fanatsarana ny fiainam-pianakaviana ary ny fanoherana ny fahasimban'ny ala. Dingana voalohany izay ahafahana mampihena ny TVA amin'ny gazy fandrehatra 20% ka hatramin'ny 5%. Miaraka amin'ny 97% ny isan-tokantrano mbola mampiasa hazo / arina, miaraka amin'ny fanjifana hazo 450,000 t isan-taona, ity fifanarahana ity dia sady hanatsara ny fiainam-pianakaviana no hampihena ny ala. Ny fifanarahana dia manan-kery mandritra ny herintaona ary tsy maintsy havaozina. Nanamorana ny vidin'ny butana 9% ary nizara tavoahangy 15000 maimaim-poana, anisan'izany ny 6000 4kg ary 9000 9kg. Fihenam-bidy 80% no hapetraka amin'ny varingarina 9 kg ary fivarotana solika amin'ny antsinjarany no hatao amin'ny isa amidy any amin'ny Faritra. Ny CMDB dia hanamboatra ala indray 60 ha / taona amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana.
FIVORIAN'NY MPANDRINDRA NY E-BILAN
Tontosa anio Zoma 30 oktobra ny fivoriana voalohan’ny Komity mpandrindra na ny Comité de Pilotage ho an’ny tolotra vaovao ao amin’ny sehatra e-Hetra dia ny e-Bilan izany. Marihana fa ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola no mitarika ity Komity ity, ary ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Foibem-pitondrana Ankapobeny ny Hetra, ny Filankevitra ambony momba ny fitantanana kaonty (CSC), ny holafitr’ireo mpitantan-kaonty (OECFM), ny Banky Foiben'i Madagasikara, ny GBCI Pnud ary IKA Conseil no mandrafitra azy. Marihana fa ny e-bilan dia fitaovana iray napetraky ny Ministeran'ny Toe-karena sy Fitantanam-bola entina hiadina amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fanaovana kaonty sy bilan. Ny tanjona dia mba tsy ho samihafa na koa hoe hiovaova ny bilan ampiasaina arakarakara ny ilàna azy, eny amin'ny ivon'ny hetra, eny amin'ny orinasa, eny amin'ny tsenam-barom-panjakana...
02 novambra 2020
Fametrahana ny tambazotra fifandraisan-davitra « e-bilan »
Ao anatin’ny fanatanterahana ny fandaharanasa « initiatives digitales », ny Foibempitondrana ankapobeny momba ny hetra, izay miara-miombona antoka amin’ny tetikasa « Gouvernance Budgétaire et Croissance Inclusive (GBCI)» tantanan’ny PNUD, ny Filankevitra ambony momba ny fitanana kaonty (CSC), ny holafitry ny « experts comptables et financiers » eto Madagasikara (OECFM) ary ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM), dia nanatontosa ny lanonana fanombohana ara-pomba ofisialy ny hetsika ametrahana ny sehatra ahafahana mandefa ireo tatitra momba ny fitantanambola amin’ny alalan’ny tambazotra fifandraisan-davitra izay antsoina hoe « e-bilan » ny andron’ny Alakamisy 24 septambra, tao amin’ny toeram-piasana misy ny Foibempitondrana momba ireo orinasa lehibe eny Amparibe.. Ao anatin’ny rijan-teny manankery momba ny hetra, ireo mpandoa hetra dia tokony handefa eny anivon’ireo ivotoerana momba ny hetra izay mikirakira ny antotan-taratasin’izy ireo ny taratasy maneho ny tatitra momba ny fitantanambolany ahitana taratasy karazany maro. Ny fanaterana an-tanana ireny antotan-taratasy misy ny tatitra momba ny fitantanambola ireny dia tsy ilaozan’ny zavatra manahirana, na ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra, na ho an’ny mpandoa hetra, mandritra ny fanomanana sy ny fandraisana ireo tatitra momba ny fitantanambola. Ho an’ny orin-draharaha misahana ny hetra tokoa mantsy, io zavatra tsy maintsy ataon’ny mpandoa hetra io dia miteraka filaharana lavareny ho famitàna an-tsakany sy an-davany...
Fampiofanana momba ny Hetran'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana
Tontosa tao amin'ny efitrano malalaky ny Région Atsinanana, ny zoma 10 Jolay lasa teo, ny fampiofanana ireo tomponandraikitra vaovao eo anivon'ny Faritra Atsinanana sy ny Kaominina Toamasina renivohitra, momba ny Hetran'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Izany dia notarihan'ny Sampan-draharaha misahana ny loharanon-karena anatiny na ny « Service des Ressources Locales » ary nifarimbonan'ireo sampana samihafa mandrafitra ny Fitaleavam-paritry ny Hetra Atsinanana. Naharitra ny tapak'andro maraina ny fihaonana ary nizotra tao anatin'ny fanajana ireo fepetra fisorohana ny fihanaky ny valan’aretina Coronavirus.
Atrikasa IISF STAKEHOLDERS 23-24 jona 2020 Fihaonambe ara-panahy
Taorian'ny fizarana latabatra boribory manampahaizana avy amin'ny inspektera momba ny hetra tsy misy sisintany (IISF), ny 22 jona 2020, atrikasa iray an'ny Stakeholders dia manangona ireo manam-pahaizana momba ny hetra amin'ny zato mahery avy amin'ny firenena maro - izay ahitana solontenan'ireo nandray anjara ny DGI - tamin'ny fakana sary tamin'ny 23 sy 24 jona. Ho fampatsiahivana, ny «inspektera momba ny hetra tsy manana sisintany» dia fiaraha-mientana ho an'ny Fikambanana Miaraha-miasa sy fampandrosoana (OECD) ary ny Program Development Nations (UNDP) mikendry ny hanampy ireo firenena amin'ny fampandrosoana hamafiso ny fahaizan'ny fanaraha-maso ny hetra. Ny Programa IIFS amin'ny ankapobeny dia ampahany amin'ny ezaka ataon'ny vondrona iraisam-pirenena mba hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny raharahan'ny hetra sy hanohanana ny hetsika ataon'ireo firenena mandroso hanetsika ny harenany. Notarihin'i John Christensen, mpikambana ao amin'ny biraon'ny talen'ny IIFS, ilay atrikasa, nizara ho dimy (5) session, nahita ny fidirana an-tsehatra, ankoatry ny hafa, ny lefitra lefitry ny Diviziona momba ny hetra iraisam-pirenena eo amin'ny minisitera Minisitry ny Fitantanam-bolam-panjakana alemà, Andriamatoa Klaus Klotz, ao amin'ny sekretera jeneralin'ny boribory fisainana sy fifanakalozana ny talen'ny fitantanana ny hetra (CREDAF) Andriamatoa Jean-Marc Niel, Ignatius Mvula, Solombavambahoaka ao amin'ny sehatr'asa fanaraha-maso ny hetsika, ny biraon'ny mpandoa hetra lehibe sy ny kaonty manokana, any amin'ny fitantanana hetra ao Zambia,...
04 jolay 2020
Herinandron’ny fifanarahana momba ny rafi-ketra anatiny
Niarahan’ny DGI sy ny kaominina, ny 09 hatramin’ny 13 martsa. Amin’ny zoma 13 martsa ho avy izao no andro natokana ho fanaovana sonia ny fifanarahana momba ny rafi-ketra anatiny na « fiscalité locale » eo amin’ny Kaominina sy ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny hetra. Ho fanomanana izany dia nisy ny atrikasa ny alatsinainy 09 sy talata 10 martsa, izay niarahan’ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra, tamin’ny alalan’ny Foibem-paritry ny Hetra Analamanga, Sampandraharaha misahana ny fandrindrana ny rafi-ketra anatiny na ny « Service de la Coordination de la fiscalité locale », ny Lehiben’ny Distrika ary ny Ben’ny tanàna amina kaominina ambanivohitra miisa enina eto amin’ny faritra Analamanga. Ny alatsinainy faha-09 martsa dia tonga nanokatra ny atrik’asa ny Tale jeneralin’ny Hetra, Andriamatoa GERMAIN, sy ny Talen’ny « Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation » (ProDéCID), Andriamatoa Florian Garcia, itsy farany izay vatsian’ny vondrona alemana GIZ vola. Telo taona moa ny faharetan’ny fifanarahana ary efa tapitra tamin’ny septambra 2019 ny fifanarahana voalohany izay nosoniavin’ireo ben’ny tanana teo aloha ; Koa ilaina ny fanavaozana sy ny fanamafisana izany amin’ny Kaominina, satria vaindohan-draharahan’ny DGI ny fampiakarana tahan’ny fampidiran-ketra sy ny ady amin’ny sehatra tsy manara-dalàna na ny « secteur informel ». Marihana fa nanao ezaka lehibe ny DGI izay hita taratra...
Anio alarobia 19 febroary 2020 ao amin'ny torolalana ny orinasa lehibe (DGE) Amparibe. Omaly no nisy ny fihaonan'ny Tale Jeneralin'ny hetra (DGI) sy ny sehatra tsy miankina ao anatin'izany ny "Order of Chartered Accountants and Finance of Madagascar" (OECFM), ny Vondrona Fikambanan'ireo Orinasa maimaimpoana sy mpiara-miasa, ny fikambanan'ny orinasa Madagasikara (GEM), orinasa mpamokatra ara-dalàna sy hetra ary koa ny kaonty sy mpitantana ny orinasa sasany. Ny birao fampandrosoana ny toekarena eto Madagasikara (EDBM) sy ny Chamber of Mines dia nandray anjara ihany koa tamin'ity fihaonana ity. Natsangana izany taorian'ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny hetra tamin'ny volana Desambra lasa teo ary mifandraika amin'ny fanitsiana ny taom-bola 2016 izay foto-kevitra fanoherana ataon'ny mpandraharaha ara-toekarena. Nohazavain'ireo manampahefana hetra ny fizotran'ny fizotran'ny hetra, izay miorina amin'ny fomba siantifika. Ny Tale jeneraly, Andriamatoa GERMAIN, mba hanazavana fa ny fizotry ny hetra dia manana ambaratonga nasionaly ary mampanahy ireo orinasa rehetra tsy misy atahorana, tsy misy fanamarinana natao. Nampiany ihany koa fa ny fanaraha-maso ny hetra, ny fiandohan'ny rafitra fanambarana dia tsy sazy fa fomba iray hampiroborobo ny fanarahana hetra ary hampihena ny hosoka amin'ny hetra. Ny DG dia efa miantso ny mpandoa hetra handatsa-bola indray ny adidy hetra amin'ny taona 2017 sy 2018; ny fanavaozana an-tsitrapo izay havoaka amin'ny fandoavana...
"Ny hetra dia mitovy amin'ny fiarah-miobona satria anjaran'ny tsirairay ny fampandrosoana ny firenentsika".
Andininy fampahalalana momba ny lalàna momba ny hetra Ordinance No. 2019-016 tamin'ny 23 desambra 2019 momba ny lalàna ara-bola 2020 Antananarivo CCIA Chamber of Commerce and Industry, ny 26 sy 27 febroary 2020. ------------- Toy ny mahazatra dia nisy ny fivoriana iray teo anelanelan'ireo mpandraharaha sy ny mpitantana ny hetra ho famelabelarana sy fifanakalozan-dresaka momba ny fanomezana hetra vaovao napetraky ny lalàna momba ny famatsiam-bola voalohany. Eny tokoa, ny alarobia 26 febroary 2020, dia natao tany amin'ny CCIA, izay hita ao Antaninarenina, andro voalohany amin'ny fampahalalana momba ny "Fampidinana ara-bola sy fanao vaovao amin'ny lalàna momba ny famatsiam-bola 2020", hetsika nokarakarain'ny ny CCIA amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Tale Jeneralin'ny hetra (DGI) sy ny Tale Jeneralin'ny Customs (DGD). Araka izany dia ny DGI no nanokatra ny baolina niaraka tamin'ny fanolorana ny fanomezana hetra vaovao ho an'ny mpandoa hetra SME-SMI, maraina, ary ho an'ny mpandoa hetra izay tantanin'ny Direction of Business Enterprises, ny tolakandro. Ny lalàna momba ny Fitantanam-bola 2020, izay voasariky ny Soso-kevitry ny Fanjakana ankapobeny (PGE), ny tanjon'izy ireo dia ny fampandehanana ny programa fampandrosoana isan-karazany, indrindra miantraika amin'ny ara-tsosialy, ny fitantanana, ny fiaraha-monina toekarena sy tontolo iainana: - faritra fitantanana: ny ady amin'ny kolikoly dia nohamafisina amin'ny alàlan'ny fanaovana lalàna ny fampiasana ny sehatra ho an'ny fanambarana...
02 martsa 2020
Atrik'asa mikasika ny fitsirihana ara-ketra
Atrik'asa amin'ny fitsirihana sy ny fanarahamaso ara-ketra nanomboka ny 05 Aogositra ka hatramin'ny 14 Aogositra 2019 ao amin'ny Colbert Hotel Antaninarenina. Izay sahanin'ny Ivo rezionay ny fanohanana ara- teknika ao amin'ny FMI ho an'ny Afrika Austral, Izay mamory ny mpisan'ny hetra eto Madagasikara sy ny Kaomorianina. Tohiny
Hatrik'asa momba ny fampivoarana ara-ketra tany amin'ny Addis Tax Initiative (ATI) , Berlin
Akon'ny hetra 51, Jona 2018
DGI mpandray anjara tamin'ny FIM 2018, Vonona hatrany ny foibem-pitantanana ny hetra amin'ny fangaraharana, manoloana ny fifanakalozana mikasika ny hetra, Hetra phone, nanampy tosika ny Orange, Ny vondrom-be ekonomika sy ny DGI dia nametraka rafitra manokana hanatsorana ny asan'ny mpandoa hetra. Tohiny
03 jolay 2018
Volavolan-dàlana mifehy ny tetibolam-panjakana 2022.
Fampitam-baovao mikasika ny volavolan-dàlana mifehy ny tetibolam-panjakana 2022. Taorian'ny fitetezam-paritra, fihaonana tamin'ireo Governora ary fivoriana niarahana tamin'ny sehatra tsy miankina sy ireo fiarahamonim-pirenena, dia vita rafitra eto anivon'ny Minisiteran'ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola ny drafitra voalohany amin'ny volavolan-dàlana mifehy ny tetibolam-panjakana 2022. Handalo fandinihina eny amin'ny Filankevitry ny Governemanta sy ny Minisitra izany avy eo, alohan'ny andefasana izany any amin'ny Antenimiera roa tonta. Ny endriny feno dia ho ampahafantarina eto ihany rehefa avy mandalo ny ambaratonga rehetra.
Fampahafantarana ireo toerana ahitana ny vaksiny COVID-19
Ho antsika mpiara-miasa eto amin’ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny fitantanam-bola, izay maniry ny hanao na eto amin’ny faritra analamanga na any amin’ny Faritra hafa dia toa izao manaraka izao ireo toerana azo antonina amin’izany.
19 aogositra 2021
Fampiofanana momba ny fampiasana ny maodely E-Hetradeclaration sy e-Hetrapayment
Fa tafiditra ao anatin'ny fampandehanana ny fiasa vaovao eo amin'ny sehatra e-Hetra, ny mpandoa hetra 10 no nitantana tamin'ny ambaratonga ny DGE dia nandray anjara tamin'ny fampiofanana momba ny fampiasana ny maodely E-Hetradeclaration sy e-Hetrapayment, tamin'ny alàlan'ny videoconference, tamin'ity zoma ity 10 Jolay 2020. Ho fampatsiahivana, ny fanambarana an-tserasera dia atao amin'ny Hetraonline ho an'ny mpandoa hetra ao amin'ny DGE, mitovy amin'ny an'ny SRE sy ny ivon-ketra, raha toa kosa ny fandoavam-bola Elektronika dia efa vita amin'ny e-Hetrapayment. Ity fanavaozana ity dia mikendry ny hanamora ny fomba fiasa amin'ny alàlan'ny mamela ny orinasa hanatanteraka ny adidiny hanambara sy handoa hetra amin'ny sehatra mitovy, miaraka amin'ny fiantohana sy filaminana bebe kokoa. Ankoatr'izay, dia tokony ho marihina fa ny fanefana hetra amin'ny Internet dia mbola tsy takiana, ary ny fampiasana ny rafitra e-Hetrapayment dia natokana ho an'ny orinasa lehibe ankehitriny. Na izany aza, raha jerena ny zava-misy ankehitriny, ny Jeneraly lefisialy momba ny hetra dia nanapa-kevitra ny hanafaingana ny fampiharana ity rafi-dalàna miaraka amin'ny rafi-piasana hafa, ka izany no nanokafana ny fidirana amin'ny serivisy fanodinana ho an'ny mpandoa hetra rehetra, amin'ny sehatra nasionaly.
18 jolay 2020
Fanentanana hampiakatra ny sainan'ny Malagasy
Hijery misymisy kokoa
05 jona 2020
Ho fitondrana ny anjarabirikiny amin’ny firenena, dia nanatanteraka hetsika fambolen-kazo ny Foibem-pitantanana ankapobeny ny Hetra, izay notarihan’Andriamatoa Germain, Tale Jeneralin’ny Hetra sy ny ekipany, ny zoma 06 febroary lasa teo, teny Andranovelona, distrikan’Ankazobe. Tonga navitrika tokoa ireo mpiara-miasa teto amin’ny faritra Analamanga, ary tena hita taratra tamin’izany ny firaisankina sy ny fiaraha-mientan’ny rehetra hamboly hazo, araka ilay teny filamatra « ho rakotra ala i Madagasikara ». Ka zana-kazo 6 000 isa no voavoly tamin’izany. Voamarika tamin’izany indrindra koa ny hafanam-pon’ireo vehivavy mpiasan’ny DGI, izay tena nanamafy ny maha-fototenin’ny « firenena » ny hoe « reny », satria dia maro izy ireo no tonga nanatontosa ny adidin’izy ireo ho an’ny taranaka. Teny am-pisarahana dia nanao ny teny fisaorany Andriamatoa Tale Jeneraly no sady nankahery ihany koa ireo mpiara-miasa « iray vatsy iray aina » amin’ny fanatontosana ny andraikitra maro samihafa izay mbola miandry ny tsirairay. Nankasitrahany manokana koa ireo « Vaiavy mahavita azy » izay nankalaza ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny vehivavy, ny alahady 08 martsa teo.
Manitatra ny fizotran'ny nomerika amin'ny fitantanana hetra eto an-toerana
Nisy dingana vaovao noraisin'ny mpitantana hetra Malagasy, ny tolakandron'ny alakamisy 6 febroary 2020. Raha ny tokony ho izy dia nisy ny fivoriana fifampidinihana voalohany teo amin'ireo solontena momba ny Direction de tax Général sy ireo tompon'andraikitra amin'ny Kaomina Urban Antananarivo no natao tao Analakely, momba ny fahafahan'ny fanitarana ny fizotran-tsary amin'ny fitantanana ny Hetra eo an-toerana, ankoatry ny hetra Synthetic, hetra mihoa amin'ny hetra amin'ny tany sy fananana amin'ny trano natsangana. Ankoatr'izay, io fiaraha-miasa io dia tsy hifandray fotsiny amin'ny fampifanarahana ny fitantanana ny loharanon-karena fa mikendry ihany koa ny fanamafisana ny fampahalalana sy fampahafantarana ho fampiroboroboana ny hetra. Hisy komity hipetraka hiatrehana ny fanadihadiana momba ny fanatanterahana ilay tetik'asa
17 febroary 2020